San Htun's Diary: အလွဲများ.....
မြန်မာပြည်မှာတုန်းကတော့ အတင်းတုတ်မယ်ဆိုရင် တပါးသူ မသိရလေအောင် လေသံတိုးတိုးလေးနဲ့အတင်းတုတ်ကြတာ။ သိသွားရင် မျက်နှာ ပူစရာကြီးကိုး။ စလုံးမှာတော့ ရွှေမဟုတ်ဘူးလို့ထင်ရင် လေသံလည်းမတိုး မကြည့်ဘဲ သူ့ အကြောင်း မပြောသရောင် ခပ်တည်တည် ခပ်ပြောင်ပြောင် အတင်းတုတ်ကြတာ။
တခါက MRT(မီးရထား)မှာ ခုံနေရာမရသေးတော့ ရှေ့ မှာထိုင်နေတဲ့ ကုလားကို ဒီကုလားက မထသေးဘူး၊ ဘယ်တော့များမှ ဆင်းမှာပါလိမ့်နဲ့ပြောနေလိုက်ကြတာ ဆင်းခါနီး ကိုယ်တော်ချောက "ကျွှန်တော်လည်း ရွှေကုလားပါ"လို့ပြောသွားတော့ အတင်းတုတ်တဲ့သူတွေခမျာ မျက်နှာပူပူ ပါးစပ်ဟောင်းလောင်းလေးနဲ့ကျန်ခဲ့တာများ...
ဘူတာရောက်ခါနီး တံခါးဝမှာ အသင့်နေရာယူထားပေမဲ့ ဂိမ်းအဆော့မပျက်တဲ့ အတန်းထဲက ဂိုးမတ်တမ်ကြီးကို စလုံးထင်ပြီး အတင်းတုတ်ပုံက "ဒီကလေးမသာလေးကလည်း ဆင်းခါနီးတောင် ဂိမ်းဆော့မပျက်" တဲ့။
ကျောင်းမှာ Parallel Programming သင်တဲ့ ပရော်ဖက်ဆာ Bruce Lester က MIT(Massachusetts Institute of Technology) ကနေ Ph.D ရထားတာပါ။ ဇူလှိုင်လတုန်းက လန်ဒန်မှာ ကျင်းပခဲ့တဲ့	Parallel and Distributed Computing နိုင်ငံတကာညီလာခံမှာ the Best Paper Award of The 2011 ရထားပါတယ်။ ဒီအကြောင်း စကားစပ်ပြီး ပြောကြတော့
စန်းထွန်းး"Lester is bachelor."
မိုင်းး"No. He is Ph.D."
ဆူနမ်၊ ရာမား နဲ့စန်းထွန်းတို့ မှာ ရယ်လိုက်ကြတာ မျက်ရည်တောင် ထွက်တယ်။ bachelor ဆိုတာ ဘွဲ့ ရလို့ တင် အဓိပ္ပာယ်ရတာ မဟုတ်ဘဲ လူပျိုကြီးလို့ လည်း အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်။
လွဲလွဲလေးလည်း ရယ်ရပါတယ်...းD
သြဂုတ် ၂၃၊ ၂၀၁၁။
ဖတ်ပြီး ပြုံးမိတယ် ညီမလေးရေ
အလွဲတွေက တခါတရံပြန်စဉ်းစားတော့ ပြုံးချင်စရာဖြစ်ရတယ်ပေါ့နော်
အတင်းကတော့ မပြောတာအကောင်းဆုံးပဲ။ ပြန်သိသွားရင် မျက်နာပူစရား)
မနိုင်းဘလော့မှာ မဒိုးကမ်ရဲ့ကွန့် မန့် တွေကို တွေ့ မိသား...ခု စန်းထွန်းဆီကို လာလည်တဲ့အတွက် သိုင်းကျူးပါရှင်...
း))).. စန်းထွန်းရေ... ကျောင်းအသစ်နေရာအသစ်မှာ ပျော်ရွှင်ပါစေဗျာ...